Dadka ku nool Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose oo Xaalad adag soo wajahday – Radio Baidoa
By Webmaster	 Last updated Feb 23, 2020
Dadka ku nool egmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa xilligaan soo wajahay xaalado adag,kadib markii dhawaan Al-Shabaab ay weerar qarax ahaa ku bur buriyeen buundadii degmadaas.
Buundada degmada Qoryooley ee qaraxa lagu burburiyey ayaa waxaa ay aheyd mid ay adegsan jireen gaadiidka xamuulka iyo kuwa kale ee ganacsiga geeya degmadaasi,hayeeshee intaas oo dhan ay meesha ka baxeen markii la burburiyey.
Dadka degmada Qoryooleey qaarkood ayaa waxaa ay sheegeen in Saddexdii Maalmood ee la soo dhaafay aysan degmada tegin gaadiidkii ganacsiga iyo khudaarta keeni jiray,taas oo saameyn ku yeelatay Bulshada gaar ahaan kuwa danta yar.
Guddoomiyaha Degmada Qoryooley Siid Cali Ibraahim ayaa dhankiisa sheegay in Al-Shabaab ay buundada ku burburiyeen Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa,isla markaana dhibaatada ka dhalatay Magaalada laga dareemay.
Saameynta ugu ballaaran ee Buundada la burburiyey ee degmada Qoryooleey ayaa waxaa ay ku yeelatay tuulooyinka,Baxnaano, Teegow, Cabdi Cali iyo tuulooyin badan,kuwaas oo Gaadiid Magaalada ku keeni jiray dalaga beeraha iyo khudaartii soo go’day.